Maitiro ekuchinjisa pakati pekudyara mari | Ehupfumi Zvemari
Imwe yemabasa anonyanya kunakira zvido zvevashambadzi vadiki nepakati inoverengerwa kuburikidza nekuchinjisa pakati pekudyara mari. Kwete chete iyo inogona kuve inobatsira kwazvo kufamba, asi hazvibhadhari euro kune vatori vechikamu chechigadzirwa ichi chemari. Chero bedzi ivo vachigadzirwa kubva kune imwecheteyo yemari institution, chero zvingave zviri. Kune rimwe divi, neiri zano rakakosha, masaver anodzivirira kubhadhara chero mutero wezvibatsiro zvakaunganidzwa panguva yese yekuchengetedza. Ehe saizvozvo muchiitiko kuti paive. Kusvikira kununurwa kwakakodzera kuchiitwa, zvishoma kana zvachose.
Kuchinjisa pakati pekudyara mari ndiko kuvhura kunozovhurika kune vese varairidzi, pasina kusarudzika chero cherudzi. Izvo hazvina basa kana ivo vakagadziriswa mari, inoshanduka, yakavhenganiswa, imwe nzira kana imwe mari. Kwete pasina, iwe unogona kunanga kune chero hupfumi hwemari panotsigirwa nehomwe yemari. Kusvikira pakuti iri mukana wakajeka pamusoro pezvimwe zvigadzirwa zvemari, kunyange zvimwe zvakafanana nemari yekudyara pachavo. Iko kunokosha ndekwekuti kuburikidza nekutsinhana kwemari iwe unovandudza iyo purofiti yezvaunofunga zvekudyara.
Chero zvazvingaitika, iwe unofanirwa kutungamirirwa nezvakawanda kana zvishoma chinangwa chinangwa kana iwe uchida kuzadzisa ichi chinangwa mukuita. Izvo zvakakosha kuti iwe uishandise nechimwe chirango kuitira kuti urege kuwira mukukanganisa kunogona kuita kuti iwe urasikirwe nemari yakawanda kupfuura inotarisirwa muchigadzirwa chemari ichi. Nekuti pakupera kwezuva izvo zvinosanganisirwa nekushanda uku ndezvekuti iwe une simba rine simba kwazvo rekudyara kwemakore mashoma anotevera kana kwaunoda kuvhara nzvimbo iwe pachako. Nekuti sekuziva kwako mune mari yekudyara iwe unogona kugadzirisa zvinzvimbo chero nguva, pasina miganho yerudzi rupi zvarwo. Kusiyana nemvumo kana mari yekutsinhana-yauchatengesana uko kwaunenge usina imwe sarudzo kunze kwekumirira mazuva ekupera.
1 Zvinodiwa kuti uite kuchinjisa
3 Chechipiri kiyi: dzakasiyana midziyo
4 Chechitatu kiyi: nzvimbo dzakachengeteka
5 Chechina kiyi: mazwi ekudyara
6 Chechishanu kiyi: inoshanda manejimendi
Zvinodiwa kuti uite kuchinjisa
Chero kuendesa pakati pekudyara mari kunofanirwa sangana nezvinodiwa zvishoma kuti ipedzwe nemazvo. Pakutanga, zvichave zvakakwana zvakakodzera kuti mari iiswe mune imwechete yezvemari institution. Ipapo mashandiro anoitwa pane imwechete yemari chigadzirwa, mune iyi mari yekudyara. Uye munzvimbo yechitatu neyekupedzisira kuti hapana rusarura kana zvachose kutengesa pavari. Ukasangana nezvinodiwa izvi, unenge uri mumamiriro akakwana ekuchinjisa pakati pemari yako yekudyara.
Chero zvazvingaitika, unogona kutora nzira mbiri. Reorient yako upfumi zvishoma kana zvachose. Ndokunge, iwe unogona kuendesa imwe yemari yako yekudyara kana, pane zvinopesana, gadzirisa yako yese yekudyara portfolio. Iyi sarudzo inoenderana zvakanyanya nezvinangwa zvako, asi pamusoro pezvose pa profile yaunopa semudhara mudiki nepakati. Ndokunge, zvichienderana nekuti iwe une hasha, wepakati kana anochengetedza saver. Zvichienderana neiyi paramende yakakosha, ini ndaizosarudza imwe kana imwe mari yekudyara. Hazvishamisi kuti iwe une rakakura mukana wekusarudza sezvo iri imwe yezvinhu zvakawandisa zvigadzirwa zvemari mumisika.
Kuita shanduko pakati pemari yekudyara nenzira kwayo uye inoshanda, wekutanga mutemo wegoridhe hausi wekuendesa kune imwechete mari yekudyara. Iwe haufanire kuita izvi chero zvapo nemamiriro ezvinhu nekuti iko kukanganisa kuti iwe unogona kubhadhara zvakanyanya kubva ikozvino. Iwe unofanirwa kuikudziridza mune akati wandei mari yekudyara, asi chii chakanyanya kukosha, icho icho chine zvinhu zvakasiyana zvemari. Pakati pekuenzana, yakatarwa, imwe nzira kana mari yemari. Hazvishamise kuti iwe une zvakawanda zvekusarudza kubva uye unofanirwa kugovera mari yako zvakanaka kuti uzvidzivirire kubva pazviitiko zvakashata mumisika yemari.
Mune imwe tsinga, sarudzo iyi inofanirwa kurongedza pasi pe muyero wekuenzana. Mune mamwe mazwi, kusanyanyisa kusimudzira imwe mari yemari pamusoro peimwe. Iyi ndiyo imwe yekiyi yekubudirira kwekuita kwako mubato rekudyara. Pamusoro pezvimwe zvekufunga nezvehunyanzvi uye pamwe kunyangwe kubva pakakosha maonero. Usakanganwe izvi kana iwe usiri kuda kuve neshamhu yakaipa kubva zvino zvichienda mberi. Nekuti ndechimwe chezvakanyanya kukanganisa zvikwereti vanoita mari.
Chechipiri kiyi: dzakasiyana midziyo
Ehezve, kunongedza mari yako yese kune yakatarwa mari yemari, semuenzaniso, harisi zano rakanaka. Kwete zvishoma. Zviri nyore kuti ugovagovera pakati pezvigadzirwa zvemhando dzakasiyana kuti vakwanise kuzadzikiswa nenzira kwayo. Kunyanya munguva dzakaipisisa dzemisika yemari. Muchikamu chakaringana uye icho chinogadziriswa nemhando yemari yauinayo panguva iyoyo. Mune iyi pfungwa, hapana mubvunzo kuti iwe unacho kwakawanda nzira dzekushandisa uye ese anoshanda chaizvo kubva pane chero maonero.
Kune rimwe divi, iwe unogona kusimudzira imwe mari yemari zvichibva pane yako kukura kutarisira mukushanda. Mune mamwe mazwi, kana iwe uchinyanya kuita hasha, iwe unofanirwa kuongorora zvakadzama mune yemari yekudyara zvinoenderana neyakaenzana. Nepo pane izvo zvinopesana, kana iwe uchida kuchengetedza yako mari kupfuura zvimwe zvekufunga, saka mhinduro inogona kunge iri yekuwedzera kuwedzera yakagadziriswa mari kana mari yemari. Uye zvakare, mune ino pfungwa, mabhangi anogona kukubatsira iwe kutora danho nekusanganisa modhi yekudyara mapotifoti iwe aunogona kudzokorora mukukwirira kwavo kwese.
Chechitatu kiyi: nzvimbo dzakachengeteka
Kana pamusoro pezvose iwe uchida kuchengetedza nzvimbo dzako kuburikidza neiyi yekudyara svikiro, haugone kukanganwa kusarudza a mari Fund. Ehezve, purofiti yayo haizove inonakidza kwazvo, asi zvirinani iwe unenge uine vimbiso yekuti hakuzove nekusiyana kukuru muhuwandu hwemari yako. Iyo izano rinoshanda mune zviitiko zvisina mubairo zvemisika yezvemari uye kwaunogona kurasikirwa nemari yakawanda kupfuura yaunofunga pakutanga. Mupfungwa iyi, kana iwe uri anodzivirira investor, hapana mubvunzo kuti mari yemari haifanire kunge isipo mune yako yekudyara portfolio.
Izvo zvinofanirwawo kuyeukwa kuti zvinoshanda kwazvo kuti iwe utsigire ako ekudyara kuburikidza nemari yekudyara iyo yakavimbika uye inotsigirwa neiyo mukurumbira wemaneja akanaka. Ichi chinhu chakakosha kupfuura iwe zvaunofunga sezvo iri zano rinogona kukupa iwe yakawanda mari kupfuura yaunofunga. Hazvishamise kuti kune mamwe epasi rese mamaneja emari ane makwikwi emari uye ayo anopa zvinonakidza kudzoka gore rega. Ndipo paunofanirwa kunangisa mari yako kubva ikozvino zvichienda mberi kana iwe uchida kuti yako yekudyara portfolio ikure zvakatsiga kana kuti zvishoma kuti ive yakati wandei kudzorwa.
Chechina kiyi: mazwi ekudyara
Izvo zvakare zvakakosha kuti iwe utore kufunga izvo izvo nguva yekupera yemari yako yekudyara. Nekuti zvinoenderana neshanduko yakakosha iyi, uchafanirwa kusarudza zvimwe zvigadzirwa kana zvimwe. Iwe hauzove nesarudzo kunze kwekusarudza iyi yakasarudzika nzira yekudyara nekuti ichave ichinyatso shanda uye iwe unozokwanisa kuita kuti mari yako ibatsirwe mune yakasarudzika nzira kupfuura pakutanga. Nekuti zvirizvo, zvinokubatsira iwe kugadzirisa chinzvimbo chako mumisika yezvemari uye pamusoro pemamwe maitiro akajairika kana echinyakare.
Mune ino pfungwa, yakasarudzika sisitimu ndeyekusarudza epakati nguva yekugara kuitira kuti iwe ugone chinja kune ese marudzi ezviitiko, kunyange isingafadzi. Iwe unofanirwa zvakare kuziva nezve kusarudza yeinvestment fund iyo ine kukurumidza resolution. Kana iwe uchida mari kune chero zvemari zvaunoda uye iwe unogona kuita imwe mhando yekusarura kana yakazara kutengesa kuti utore chikamu chemari yako. Kwete pasina, ramba uchifunga kuti kune zvigadzirwa zvine hunhu uhu.
Chechishanu kiyi: inoshanda manejimendi
Zvichava zvakakosha kuti chikamu chakanaka chevatariri vemari yako yekudyara chiitwe pasi pehunhu uhwu. Ehezve, ichave iri imwe yenzira dzakanakisa dzekuenderana nemhando dzese dzezviitiko, pasina iwe unofanirwa kuita chero chinhu. Maneja pachayo anenge achitarisira sarudza akanakisa emari zvinhu nguva dzese. Kukuvadza kwekusabata manejimendi, izvo zvinonyanya kukurudzira munguva dzekusimudzira mumisika yemari. Iwe unogona zvakare kusarudza aya maviri emhando dzekudyara mune yako portfolio yemari.
Kune rimwe divi, kushingaira manejimendi kunokutendera iwe kuti uve unochinjika zvakanyanya munzira dzako dzekudyara. Kunyangwe pane zvinopesana, ivo vanowanzove nemakomisheni ayo anowanzo kuve akawedzera nekuda kwehunhu hwechigadzirwa chaicho. Uye zvakare, inogona kuve neyakareba nzira maererano nehurefu hwayo sezvo ichiratidzwa kune ese ari embaira uye ekuwedzera nguva, zvisina kujeka. Kusvika padanho rekuti kuita kwavo kunogona kuve kwakakwirira mune ese mazwi avanonongedzwa. Kana iwe ukapinza iri zano rechokwadi zvinhu zvinogona kuenda zvirinani kubva ikozvino Chero chero chimiro chaunopa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Maitiro ekugadzirisa pakati pemari yekudyara
Chii chinonzi ROA?